China T-Post Shelving umzi-mveliso kunye nabavelisi |UKWAZISA
Uhlobo lweRacking: T-post shelving
Isicelo: kudederhu lweevenkile, ivenkile enkulu, indawo yokugcina amashishini kunye neziko likarhulumente
Iphaneli yesinyithi ye-T-post shelving ixhaswa ziziqeshana zeshelufu, ezenza ukuba indibano ibe lula, kunye nohlengahlengiso lweshelufu olulungeleyo ukuhlangabezana neemfuno ezizodwa zokugcina.
Amalungu e-T-post shelving alula kakhulu, njengokuthe tye, inkxaso esecaleni, ipaneli yentsimbi kunye nokuqhotyoshwa ngasemva, ngoko kuyabiza kakhulu.Ukongeza kumacandelo aphambili, kukho ezinye izesekeli zokhetho, ezinje: i-mesh yecala, i-mesh yangasemva, i-cladding esecaleni, i-back cladding, isahluli kunye njl.
◆ Eyakhiwe ngamacandelo alula, i-T-post shelving iyiyunithi ekhuselekileyo nethembekileyo, eguqulelwe kwizicelo ezahlukeneyo.
◆Idityaniswe neplate yonyawo yentsimbi ebotshwe phantsi, i-T-post shelving iyakwazi ukuma ngokuzinzileyo.
◆ Iqiniswe nge-back bracing, yonke i-shelving structure yomelele ngokwaneleyo ukulayisha kunye nokugcinwa.
④Ukubonakala kakuhle kwempahla
I-T-post shelving iyilwe njengesakhiwo esivulekileyo.Inzuzo enkulu ifanelekile kwisitokhwe esipakishiweyo, esinika ukubonakala okuphezulu kwezinto ngaphandle kweendawo zeshelufu ezabelwe.Oko kuququzelela umqhubi ngokufanelekileyo kwendawo kunye nokufikelela ngokukhawuleza.
Ngaphambili: I-Pallet Racking ekhethiweyo
Okulandelayo: I-Attic Shuttle
I-Four Way Shuttle, Qhuba kwi Racking, IShuttle yomntwana, ICarton Live, Asrs Ugcino, Umhambisi,